Ukujonga kwakhona: 'Amanzi amnyama: iinzonzobila' zihamba ebumnyameni- iHorror
Ikhaya	Iindaba ezothusayo zoLonwabo	Ukujonga kwakhona: 'Amanzi amnyama: iinzonzobila' ziNtsundu ebumnyameni
Ukujonga kwakhona: 'Amanzi amnyama: iinzonzobila' ziNtsundu ebumnyameni
by UJacob Davison Agasti 6, 2020
by UJacob Davison Agasti 6, 2020 1,078 imbono
Kukho into malunga nezilwanyana ezihlasela irhamncwa kunye neentlekele zendalo ezibetha ngenene nge-prche psyche. Iintlobo ze-Asa, siye saqhubela phambili kwinqanaba apho singazikhathazi ngento entla kwethu kwityathanga lokutya ekuthatheni ngathi. Nangona kunjalo, uloyiko luhleli. Esichaza nokuba kutheni iziganeko zobomi bokwenyani zokuhlaselwa zizilwanyana zixela iindaba. Ngalo lonke ixesha ibhere okanye ukrebe ehlasela umntu, yintloko leyo. Njengokuba bekunjalo ngo-2003 xa abantu abathathu abaselula baphuma baya kwintlango yaseNtla ye-Australia kwaye bazifumana sele bejikelezwe yingwenya. Oku kusebenza njengesiseko somdlalo bhanyabhanya ka-2007, Amanzi amnyama. Ngoku, malunga neminyaka eli-13 kamva, kulandele enye into evela emaphandleni nge Amanzi amnyama: enzonzobileni.
Ukuthatha iseti ebuyela eMantla e-Australia, uJennifer (Jessica McNamee) ukhuthazwe liqabane lakhe elithandekayo u-Eric (Luke Mitchell) kunye nabahlobo u-Yolanda, Viktor, kunye no-Cash (Amali Golden, Benjamin Hoetjes, Anthony J. Sharpe) bathathe isigqibo sokuya kwi-spelunking kwi entlango. Ukuhla ukuya kwinkqubo entsha yomqolomba ebonakala ngathi ayifakwanga. Njengokuba ilishwa lalinokuba nalo, kwabakho isaqhwithi, izikhukhula zemiqolomba kwaye zitywinele ngaphakathi kuzo.
Umlawuli u-Andrew Traucki ulawule ibali lokuqala lokusinda kwengwenya kwi Amanzi amnyama kwaye ndisebenze kwingozi efanayo yezilwanyana eyodwa Ingqaqa kubandakanya abadadayo vs ukrebe. Ngoku, ebuya yedwa, ubuyele ezingcanjini zakhe ngale ndlela yokomoya. Ngelishwa ngaphandle kokumiselwa kwesakhiwo kunye nesiqwenga kunye noloyiko olungapheliyo lweengwenya, imovie ayisiyonto imnandi. Ekuvukeni kweemovie ezinje Isikhafu kwaye 47 Imitha Ezantsi ikwazile ukunyuka kwezibonda ukuya kwinqanaba eliphezulu njengoko zinokuya. Ke, ngelixa Amanzi amnyama: enzonzobileni unomdla othembisayo othembisa ngobungozi obuninzi, isenzo kunye noloyiko lweentshaba zengwenya zihlala zicinga.
Eyona nto kugxilwe kuyo ngesiqwenga sihlala siwela kubalinganiswa abaninzi ukungasebenzi kakuhle kunye nokulwa njengoko bezabalazela ukuphila. Kukulungele ukuzalisa ubunzulu beempawu zabo, kodwa kwangaxeshanye kuwela kwisepha opera njengedrama. Njengokubuyiswa kukaViktor kumhlaza kwaye abanye bagqwethe ngokujika kwaye bajike kubalinganiswa ubudlelwane kunye nezityhilelo. Kwaye masijongane nenyani, silapha kwizilo, kule meko, iingwenya. Ngendlela imovie efotwe ngayo asizifumani kangangoko sinqwenela kwaye izoyikiso azisebenzi ngokupheleleyo.
Ezinye zeempawu zam endizithandayo kumdlalo bhanyabhanya eneneni ekuqaleni kwesiqalo seentlobo ezithile. Isibini sabakhenkethi baseJapan (uLouis Toshio Okada, uRumi Kikuchi) bayaphikisana emaphandleni xa ngengozi behlelele phantsi kwiinkqubo zomqolomba wengwenya ongezantsi. Yenza ukugqabhuka kwenyani kwe-adrenaline nangona imfutshane. Kwaye imovie iyisebenzisa kakuhle emihlathini Njengekhredithi encinci oyibonayo, yoyikisa ngayo. Amanye amaxesha anexesha elinzima kuxa abalinganiswa kufuneka behamba emanzini ahleliyo, ungaqinisekanga ukuba esinye sezilwanyana ezinamaxolo siza kuhlasela.
Ayisiyonyani yokwenyani, kodwa ukuba ukwimo yemvakalelo yebali elikhawulezayo le-spelunkers vs ngwenya phantsi komhlaba, le yeyakho.
Amanzi amnyama: enzonzobileni ibetha i-VOD nge-7 ka-Agasti ka-2020